राजनीति र व्यवसाय एकअर्काका परिपूरक हुन् - Karobar National Economic Daily
राजनीति र व्यवसाय एकअर्काका परिपूरक हुन्
query_builderAugust 10, 2017 10:47 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility459
अनिल रुंगटा सञ्चालक जगदम्बा इन्टप्राइजेज पाइप उद्योग
उद्योगी अनिल रुंगटा राजनीतिक एवं व्यावसायिक व्यक्तित्व हुन् । विद्यार्थी कालदेखि नै नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएका रुंगटा संविधानसभा सदस्य हुँदै अहिले रूपान्तारित व्यवस्थापिका संसद् सदस्य छन् ।
नेपाली कांग्रेसमा निकै राम्रो पहुँच भएको र शीर्षस्थ नेताहरूसँग पनि राम्रो सम्बन्ध भएको व्यक्तिका रूपमा उनलाई चिनिन्छ । वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष ओमप्रकाश रुंगटाका छोरा अनिल रुंगटा बुबाले गरेको हार्डवेयर फलामसम्बन्धी सामग्रीको व्यवसायबाट व्यवसायमा संलग्न रहँदै आएका छन् । उनको होटल, पर्यटन उद्योग तथा अन्य फलामका उद्योगहरूमा पनि लगानी छ ।
रुंगटा अहिले जगदम्बा इन्टप्राइजेज पाइप उद्योगका सञ्चालक हुन् । राजनीति र उद्योग–व्यवसायमा एकसाथ सक्रिय रहेका रुंगटासँग राजनीतिले उद्योग–व्यापारमा पार्ने प्रभाव, राजनीति र व्यवसायबीचको सम्बन्ध, यसको चुनौती तथा यसमा देखिएका समस्या र समाधानका सम्बन्धमा कारोबारकर्मी नीरज पिठाकोटेले गरेको कुराकानीको सार :
राजनीति र व्यवसायमा एकैसाथ लागिरहनुभएको छ, कसरी सम्भव छ र समय दिनुभएको छ ?
म विद्यार्थी कालदेखि नै राजनीतिमा संलग्न रहेको व्यक्ति हुँ । मेरो व्यवसायमा संलग्नता भने पछि भएको हो । यद्यपि, बुबाले गर्दै आउनुभएको व्यवसायमा नै मेरो पनि संलग्नता रह्यो । अब राजनीति गर्ने व्यक्तिले व्यवसाय गर्नु हुन्न र व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले राजनीति गर्नु हुन्न भन्ने मानसिकता गलत हो । राजनीति विचारले गरिन्छ, जुन विचारले लक्ष्यसम्म पु¥याउँछ ।
त्यस्तै, व्यवसाय हिसाबले गरिन्छ, जुन सफलता प्राप्त गर्न सहज हुन्छ । त्यसैले राजनीति र व्यवसाय एक–अर्काका परिपूरक हुन् । राजनीतिले विचार, सिद्धान्तमा रहेर हिँड्न सिकाउँछ । व्यवसायले नैतिक र जिम्मेवार भएर संघर्ष गर्नुपर्छ भन्ने सिकाउँछ । नैतिकता र सिद्धान्त दुवै क्षेत्रमा हुन्छ । त्यही अनुसार मैले पनि अहिले राजनीति र व्यवसायलाई समय दिइरहेको छु । यसरी नै अगाडि बढिरहेको छु ।
व्यवसायमा धेरै आर्थिक प्रदूषण भएको छ भन्ने गरिन्छ, राजनीतिमा चाहिँ प्रदूषण हुन्छ कि हुन्न ?
राजनीतिमा प्रदूषण छ भनेर कसले भन्छ ? राजनीति भनेको समाजका हरेक अंगलाई प्रभावित पार्ने एउटा नीति हो । अहिले आएर केही व्यक्तिले राजनीतिले गलत प्रभाव पा¥यो भन्नेहरू पनि छन् ।
राजनीति गरिरहेका बेला प्रदूषण गर्ने केही व्यक्ति मात्रै छन्, जसलाई औंलामा गन्न सकिन्छ । धेरै व्यक्ति अहिले सिद्धान्त र विचार बोकेर लडेका र राजनीति गर्नेहरू धेरै जेल गएर लामो यात्रा पार गरेर आएका पनि छन् ।
त्यसको सुखद पक्ष पनि छ । सुखद पक्षलाई नहेरी हामीले बढी नकारात्मक पक्षहरूलाई मात्र कोट्याउने गरेका छौं । यसलाई त्यो रूपमा लिनु हुँदैन । राजनीति भनेको प्रदूषित भने होइन । सेवाभावले ग¥यौं भने राजनीति एउटा विशुद्ध पेसा हो जस्तो लाग्छ ।
राजनीतिकै कारण नेपालका उद्योग–व्यवसायमा असर पारेको छ भनिन्छ नि ?
व्यवसायको कुरा गर्दा जहाँसम्म व्यवसायका लागि नियन्त्रण गर्ने धेरै कानुनी प्रक्रिया छन् । नेपालमा २००७ सालदेखि नै नेपाली आफैंले संविधान लेख्न पाउनुपर्छ भन्ने अडान थियो, मूर्तरूप लियो । हरेक दशकपछि एउटा नयाँ विचारको क्रान्ति लिएर राष्ट्र आन्दोलनमा होमियो । विभिन्न तहमा विभिन्न खालको आन्दोलन भयो । अहिलेसम्म पनि हामी संविधानको कार्यान्वयनको दिशामा छौं ।
जबसम्म संविधान स्थापित हुँदैन, जबसम्म स्थायी सरकार निर्माण हुँदैन, जबसम्म स्थायी सरकारले पाँच वर्ष, दस वर्ष अथवा लामो समयसम्म काम गर्ने वातावरण बन्दैन, त्यो बेलासम्म कुनै पनि राष्ट्रको विकास हुन सक्छ भन्ने कुरामा म सहमत छैन । राष्ट्रको आर्थिक विकासका लागि स्थायी सरकार हुनुपर्छ ।
स्थायी सरकारका लागि संवैधानिक रूपमा पनि प्रस्टता हुनुपर्छ । पछिल्लो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनपछि पाँच वर्षसम्म राम्रो आर्थिक विकास भएकै हो । त्यसपछि फेरि माओवादीको सशस्त्र युद्ध सुरु भयो, आर्थिक विकास रोकियो । अहिले पनि त्यही क्रममा छौं । स्थायी सरकार छैन । हरेक वर्ष सरकार परिवर्तन भइरहेको छ ।
जुन शक्तिशाली सरकार बन्नुपथ्र्यो, त्यो बन्न सकेको अवस्था छैन । जबसम्म शक्तिशाली सरकार बन्दैन, तबसम्म देशको आर्थिक विकास हुन सक्दैन । आर्थिक विकासको गति स्थायी सरकारले नै निर्धारण गर्छ । स्थायी सरकार नहुँदा व्यापार–व्यवसाय पनि प्रभावित भएको छ । साथमा, स्पष्ट नीति पनि हुनुपर्छ । अन्तरमन्त्रालयहरूबीच समन्वयको अभावले गर्दा पनि विकास–निर्माणका कार्यहरूले तीव्रता पाउन सकेका छैनन् ।
एउटा मन्त्रालयले अनुमति दिन्छ, अर्को मन्त्रालयले अवरोध गर्छ, त्यो झमेलाले पनि विकासमा बाधा पु¥याएको छ । नीतिगत रूपमा प्रस्ट, स्थायी सरकार र भिजन हुनुपर्छ । यो भयो भने आर्थिक विकासका सम्भावनाहरू छन् ।
तपाईं जनताको प्रतिनिधिका रूपमा नीति–निर्माण तहमा पनि हुनुहुन्छ । अर्कातर्फ व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ । निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि कस्ता खालका नीति निर्माण हुँदैछन् । त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ ?
अहिले औद्योगिक ऐन आइसकेको छ । कम्पनी ऐन पनि आइसकेको अवस्था छ । त्यसमा गुणात्मक सुधार भएको छ । लगानीको वातावरण बनेको छ । ठूला योजनाको वातावरण पनि बनेको छ । तर, अभ्यास हुन बाँकी छ । अहिले पनि स्पष्ट नीति छैनन् ।
धेरै झन्झटिला प्रक्रिया छन्, तिनलाई न्यूनीकरण गर्न सकिएको छैन । यसलाई समाधान ग¥यौं भने लगानीको वातावरण बन्छ । साथै, मैले बारम्बार भन्दै आएको छु, आउने दिनहरूमा स्थायी सरकारसहित स्पष्ट नीति तथा औद्योगिक र व्यावसायिक वातावरण बनाउन सक्यांै भने लगानीका सम्भावना धेरै छन् । यो स्थायी सरकारबाट मात्र सम्भव छ ।
सत्तामा धेरै वर्ष बसेको पार्टीको तपार्इं सांसद हुनुहुन्छ, अहिले पनि कांग्रेसले नै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । अहिलेको सन्दर्भमा राजनीतिज्ञ नभएर व्यवसायीका दृष्टिकोणले भन्नुपर्दा उद्योग–व्यापारको प्रवद्र्धनका लागि सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने काम के–के हुन् ?
सरकारले प्राथमिकताका आधारमा जुन व्यवसायीलाई चाहिने आधारभूत कुरा जस्तै— बिजुली, सडकबाटो, पूर्वाधार, व्यवसायीको लगानी संरक्षणजस्ता कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । आधारभूत कुरामा बजारीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा राज्यले बढी ध्यान दिनुपर्छ । उद्योगलाई चाहिने सडक, विद्युत् र लगानी सुरक्षा भयो भने उद्योगहरूको स्थापना हुन्छ । उद्योग स्थापना भयो भने रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ । रोजगारी सिर्जना हुनु भनेको आर्थिक विकासका लागि सकारात्मक पक्ष हो ।
सामाजिक सुरक्षा विधेयक संसद्ले पारित गरेको छ । यसको मजदुर संगठनहरूले पनि स्वागत गरेका छन् । तर, कार्यान्वयनमा आशंका पनि देखिन्छ । कार्यान्वयन भएन भने फेरि रोजगारदाता र मजदुरबीचको सम्बन्ध बिग्रिएला । यसलाई व्यवसायीको नजरबाट कसरी हेर्नुहुन्छ ?
यो आजको आवश्यकता हो । हिजोसम्म कुनै पनि औद्योगिक प्रणाली पुरानै शैलीमा चलेको थियो । त्यतिखेर उद्योगहरूले उत्पादन गर्ने र व्यवसायमा मात्रै गर्नेमा सीमित थियो । अहिले त्यो फरक भएको छ । त्यसमा परिवर्तन आएको छ । यो एउटा नयाँ अभ्यास सुरु भएको छ । सबैको भावनालाई समेटेर सामाजिक उत्तरदायित्वका साथ अगाडि जानुपर्छ भन्ने मानसिकताको विकास भएको छ ।
त्यसले मालिक र मजदुरबीचको सम्बन्धलाई पनि सुमधुर बनाउने तथा उत्पादनमा स्थायित्व गर्न मद्दत पुगेको छ । अब सामाजिक उत्तरदायित्वमा को–को पर्छन् ? त्यसमा सबैभन्दा पहिले उद्योगमा कार्यरत मजदुर नै पर्छन् । उनीहरूलाई पनि सँगसँगै लिएर जानुपर्छ । साथै, समाजका अन्य पिछडिएका वर्गलाई पनि सँगै लाने भनेर सिद्धान्तका साथ अगाडि बढेको छ । त्यसलाई हामीले सकारात्मक लिनुपर्छ । एउटा निश्चित रकम, जुन लाभको १ प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्छ भनेर ऐनले पनि तोकिसकेको छ, अब व्यवहारमा पनि लागू हुन्छ ।
यसले गर्दा उद्योगले मजदुरहरूको एउटा नैतिक समर्थन पनि पाउँछ र उद्योगले पनि यसलाई सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा ऐनको कार्यान्वयनमा म खासै चुनौती देख्दिनँ, किनभने ऐनले नै स्पष्ट पारिदिएको छ । तर, कुनै त्यस्ता रुग्ण उद्योग छन् या कुनै त्यस्ता उद्योग छन् भने, त्यस्तो ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ भने त्यसलाई पनि संशोधन गरेर लानुपर्छ ।
वीरगन्जमा भौतिक पूर्वाधारका संरचनाहरू तपाईंकै आँखाअगाडि क्षतविक्षत अवस्थामा छन् । औद्योगिक करिडोरका सडक त्यस्तै छन् । एकीकृत भन्सार जाँच चौकी अहिलेसम्म निर्माण हुन सकेका छैनन् । यसलाई व्यवस्थित र एकीकृत ढंगबाट लिएर जान तपाईंको भूमिका प्रभावकारी देखिएन नि ?
तपाईंले भनेको कुरा सही हो । यसमा मलगायत हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू कहीं न कतै दोषी छौं । पहिलो कुरा के छ भने वीरगन्जको हकमा धेरै योजना आएका छन् । त्यसको निर्माणको गति सुस्त हुनु तथा गुणस्तर नुहुनु त्यसको प्रभावकारी अनुगमनको कमी हो । हामीले उचित अनुगमन गर्न सकेका छैनौं । यसको कारण भनेको यहाँ रहेका पार्टीहरूबीचको अन्तरपार्टी समन्वयको अभाव हो ।
अर्को कुरा के हो भने हामीले एउटा संयन्त्र निर्माण गर्न सकेका छैनांै । हामी सांसद् काठमाडौंमा हुन्छांै । काठमाडौंमा भए पनि यहाँका राजनीतिक प्रतिनिधिहरूले एउटा सञ्जाल बनाउने र त्यो टिमले राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर विकासको काममा मात्रै केन्द्रित भएर काम गरेको भए आज यो अवस्था आउने थिएन । यसका लागि मैले राजनीतिक दलका व्यक्तिहरूसँग पनि कुरा राखेको छु । धेरै वरिष्ठ राजनीतिकर्मीहरूसँग पनि मैले आग्रह गरें, तर त्यस्तो वातावरण बन्न सकेन । मलाई लाग्छ, यसमा पर्साका सबै राजनीतिक दलको कमी–कमजोरी छ ।
अब भोलि पनि यस्तो व्यवहार भयो भने वीरगन्जलाई हामीले सोचेजस्तो बनाउन सक्दैनौं । अब डाइपोर्टको कुरा गरौं, आज त्यो हाम्रा लागि अपुग भइसक्यो । २० वर्षपहिलेको अवधारणामा निर्माण गरिएको छ । त्यसलाई विस्तार गर्नुपर्नेछ । बाटो साँगुरो भइसक्यो । गाउँपालिका र सहरसँग जोड्ने कुरा, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका आधारभूत आवश्यकताहरू छन्, त्यो नै हामीले यथोचित सम्बोधन गर्न सकेका छैनौं । यसमा हामीले सामूहिक प्रयास गर्नुपर्छ । कुनै राजनीतिक स्वार्थबिना नै काम गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न सकिएन भने हामी भोलिका दिनमा पर्सावासीको प्रशंसाका पात्र हुन सक्दैनौं ।
वीरगन्जको बृहत् विकासका लागि हामीले एउटा छलफल अन्तक्र्रिया गर्न लागिरहेका छौं । अर्थमन्त्री, अर्थमन्त्रालयका पदाधिकारी, भर्खरै नियुक्त भएका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा पदाधिकारी, केही मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू, पर्साका सांसद् तथा अगुवाहरू, राजनीतिककर्मी, सञ्चारकर्मी र समाजका व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्ने तयारी छ ।
यसले पहिलो अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माणमा सहयोग पुग्छ र कार्यान्वयन गर्न पनि सहज बनाउँछ । यसले एउटा निश्चित समयमा यो विकास हुन्छ वा भइरहेको काममा यो सुधार यति अवधिभित्र गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धतासहितको कार्यक्रम ल्याउने व्यक्तिगत सोच छ । सबैभन्दा ठूलो समस्या नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्न सकेका छैनांै । भएका भौतिक पूर्वाधारका संरचना पनि संरक्षणको अभावमा जीर्ण भएका छन् ।
खेलकुदका लागि रंगशाला, अस्पताल, मैत्री पुल, घण्टाघरलगायतका अन्य थुप्रै पूर्वाधार संरचनाहरू जीर्ण भइसकेका छन् । यी सबैलाई हामीले सामूहिक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ, राजनीतिक रूपमा एकमत हुनुपर्छ, सामाजिक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ । यदि यो कुरा गरिएन भने हामी सम्पूर्ण वीरगन्जवासी एउटा नाम मात्रैको आर्थिक राजधानी भनेर बस्नुपर्नेबाहेक अरू केही हुँदैन ।
नेपालको कुल राजस्वको आधा योगदान वीरगन्जले दिएको छ भन्ने दाबी मात्र गरिन्छ । त्यसअनुसार वीरगन्जको विकास पनि भएन भन्ने गुनासो छ । तर, पर्साबाट मात्रै १७ जना सांसद हुनुहुन्छ । त्यसका लागि एक ठाउँमा बस्न किन सक्नुभएन ?
त्यसका लागि छोटो वा बृहत् छलफलका लागि भेटघाट भइरहनुपर्छ । त्यो हुन सकेन । वीरगन्जको योजनाका बारेमा निरन्तर छलफल गरिरहनुपर्छ । पर्साका सांसदहरू एकै ठाउँमा उभिएर यहाँको विकासका लागि समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
अब यहाँ समन्वयको कमी छ । हामीले सबैसँग संवाद र समन्वयका साथ सामूहिक रूपमा जानुपर्छ । सामूहिक रूपमा गयौं भने मात्र काम प्रभावकारी हुन सक्छ ।
नेपालको आर्थिक विकासका लागि के–कस्ता सम्भावना देख्नुभएको छ ? यसलाई वैदेशिक व्यापारसँग जोड्न र नेपाललाई परनिर्भरताबाट बचाउन के गर्नुपर्छ ?
सबैभन्दा पहिले नेपालको आर्थिक विकासको कुरा गर्ने हो भने नेपालको प्रमुख आधार भनेकै खानी, पानी र जनशक्ति हो । यो तीनवटै क्षेत्रचाहिँ अहिले भर्जिन छ । नेपालमा सबै किसिमको खानी छ । जस्तै, नेपालमा चुनढुंगाको खानी छ ।
यसले सिमेन्टलाई आत्मनिर्भर बनाएको छ । त्यस्तै गरेर अरू पनि खानी छन् । यसलाई उत्खनन गर्न सकियो भने आयात घटाउँछ, रोजगारी बढाउँछ र व्यापारघाटा पनि घटाउँछ । निर्यात गर्न सके व्यापारघाटामा तीव्र र गुणात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । वैदेशिक व्यापारका लागि बन्दरगाहकै कुरा गर्दा अहिले दुईवटा प्रयोग भइरहेको छ । यसलाई अझ सहज र बढीभन्दा बढी उपयोग गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।
अर्को मुम्बईबाट नवासेवा बन्दरगाह तथा गुजरातको पनि पोर्ट प्रयोग गर्न पहल गर्नुपर्छ । उताबाट पनि जोड्न सकिन्छ । किनभने उताबाटै सामान नेपालको पश्चिमक्षेत्रमा प्रयोग गर्न सक्यौं भने त्यसले नेपालको पश्चिम क्षेत्रको व्यापार–व्यवसायमा सहजता आउने र आर्थिक विकासमा सहयोग हुनेछ ।
यति मात्रै होइन, नेपालमा हामीले उचित ढंगबाट औद्योगीकरण, जलविद्युत् उत्पादन र खानी उत्खनन गर्न सक्यांै भने नेपाली युवाहरू रोजगारीका लागि कहीँ जानु पर्दैन । यसले धेरै रोजगारी सिर्जना गर्छ । यसका लागि सबै क्षेत्रका नीति–निर्माण तहमा काम गर्ने, उद्योगी–व्यवसायी तथा राजनीतिकर्मीहरू पनि सामूहिक रूपमा लाग्नुपर्छ ।
नेपाली कांग्रेस पर्यटन उद्योग होटल उद्योगी अनिल रुंगटा